How to print big posters withasmall printer - phpmyanmar.com
Posted By - Ko Ko - June 6, 2008
Summary : The PosteRazor cuts an image into pieces which can afterwards be printed out and assembled toaposter As input, the PosteRazor takes an image and the resulting poster is saved asamultipage PDF document. An easy to use wizard like user interface guides through5steps. PosteRazor is available asaWindows, an OSX andaLinux version It is an open soince GNU licensed project which is hosted on SourceForge.
ရိုးရို Printer ဖြင့် poster ကြီးပြုလုပ်ခြင်။
သင်သည် သင့် ချစ်သူ့ ပုံကို လူတစ်ရပ် လောက်ကြီး သော poster ကြီး အဖြစ် print လုပ်ပြီး သင့် အခန်း တွင် ချိတ်ဆွဲ ချင်တယ် ဆို ပါစို့။
၁။ Poster ကြီးများ print လုပ်ပေး သော ဆိုင်တွင် ငွေများများ ပေးပြီး အပ်နှံ နိုင်သည်။ (ပထမ နည်)
၂။ သင့် အိမ်ရှိ A4 ဆိုက် printer ကို သုံးပြီး ၄င်း poster ကြီကို print လုပ်ခြင်း။(ဒုတိယ နည်း)
ဒါပေမဲ့ printer သေးသေး လေးနဲ့ ဘယ်လို print လုပ် မှာလဲ။ လွယ်လွယ် လေးပါ။ PosteRazor software ကို သုံးပြီး print လုပ်လိုက် ရင်ရ ပါတယ်။
ဒီ software ဟာ ပုံ အကြီးကြီး ကို အပေါ် ပုံမှာ ပြထား တဲ့ အတိုင်း၊ အကွက် သေးသေး လေးများ ဖြစ်အောင် ဖြတ်ပေး ပါတယ်။ ပြီးရင် သင့် A4 ဆိုက် printer လေးနဲ့ print လုပ်ပြီး သူ့ နေရာ နဲ့သူ ဆက်ပေး လိုက်ရင် ခန်းလုံးပြည့် ပုံကြီး ဖြစ်သွား ပါ လိမ့်မယ်။
ဒီ Sofrware ဟာ အလကား ပေးတဲ့ free software ဖြစ် ပါတယ်။ ၄င်း PosteRazor software ကို open source GNU License နဲ့ ဖြန့်ဝေ ပေးထား ပါတယ်။
၄င်းကို http://sourceforge.net/projects/posterazor/ မှာ အခမဲ့ download လုပ်နိုင် ပါတယ်။
Posted as - [software]
End of Article - How to print big posters withasmall printer
Myo Myint Kyaw October 14, 2010 - 8:22 am
ခု လိုသိရတဲ့ အတွက် ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ခင်ဗျာ...
KoDewa October 14, 2010 - 8:22 am
ကျေး ဇူး ပဲ ။ အခု လော လောဆယ် အသုံး မ လို သေး ပေမယ့် တချိန်ချိန် တော့ အလွန် အသုံး ၀င်မယ့် နည်းလမ်း လေး တစ်ခုပါ ။ မျှဝေ ပေး တာ သာဓုပါ ။
Processing time -- 0.0267 seconds.